Vasikana Vepamutemo muICT Day: Tinotaura naFran del Pozo, kubva kuCode.ORG | Gadget nhau
Vasikana Vepamutemo muICT Day: Tinotaura naFran del Pozo, kubva kuCode.ORG
Miguel Hernandez | 22/04/2021 13:47 | General, Noticias
Nhasi, Kubvumbi 22, 22, iro zuva repamutemo repasi rose revasikana muICT rinocherechedzwa, izuva rakakosha kana tichifunga nezvegwanza rakakosha rinoitika mukushandurwa nedhijitari, ndosaka tichida kukuudza izvo zvine Code ORG uye mashandiro ayo anobatsira zviuru zvevasikana kubva pasirese pasirese chero chikamu chemba kudzidza zvakawanda nezve matekinoroji matsva uye kunyanya zvirongwa. Takakurukura naFran del Pozo, mukuru weCode.ORG kuSpain.
PaActualidad Gadget, inogara yakatendeka kune edu edhisheni maitiro, isu tinoenderera nezvinyorwa zvizere zvehurukuro dzatinoita.
Mune chii? Code.ORG yakafunga riinhi kutora chikamu mukuparadzaniswa kwedhijitari pakati pevechidiki uye kuve chikamu cheiyi shanduko?
Code.org yakazvarwa mu2013 muUnited States ine chinangwa chekuti mwana wese muzvikoro zvese zvepasirese ane mukana wekudzidza kukodha.
Iyo yakaratidza kubudirira modhi. Vanopfuura makumi mana muzana evadzidzi veNorth America vane account paCode.org, pamwe ne + 40MM vadzidzisi uye vadzidzi ve2MM kutenderera pasirese (hafu yavo vakadzi).
Iyo purojekiti inotungamirwa nevatungamiriri vepasirese, vezvematongerwo enyika, vezvemagariro pamwe nehupfumi, vakadai saBill Gates, Jeff Bezos, Satya Nadella, Eric Schmidt, Tim Cook, Barack Obama, Bill Clinton, Richard Branson, BONO, kana madhiri emaUniversity eStanford, Harvard kana MIT MediaLab pakati pevamwe vazhinji ... and inobhadharwa nemamwe makambani makuru pasi rose, akadai seGoogle, Microsoft, Amazon, General Motors neDisney.
Code.ORG inoshanda sei kubatsira vasikana vadiki kudzidza zvirongwa?
Pamwe chete neKhan Academy, isu tiri iro guru rekudzidzisa pachikuva pasirese maererano nenhamba yevashandisi. Tine zvemukati zvemahara zvinoshandurwa mumitauro inodarika makumi matanhatu yevadzidzi kubva pamakore mana kusvika pamakore gumi nemasere. Uye zvakare, isu tinogara tichikurudzira kusimudzira mukana wevechidiki muzvirongwa.
Musiyano wedu mukuru ndewekuti isu tiri chikuva chakavhurika zvachose uye chakasununguka kubva chero kupi zvako pasi. Izvo zvirimo zvakaitirwa kudzidzisa vakomana nevasikana kubva vachiri vadiki, (40% yevadzidzi veAmerica mune iri zera boka vashandisi veCode.org) vane makosi akasiyana zvichienderana nezera rekudzidza. Kune rimwe divi, iro rakananganawo nevadzidzisi, semubatsiri mukuru wekudzidzisa uye chishandiso chekuvandudza zvirongwa zvavo zvedzidzo. Muchidimbu, kuCode.org tinokurudzira muenzaniso unobatanidza uye wakanaka, kune vese, nechinangwa chekubvisa ruzivo, gadzi uye makwikwi gwanza anogona kunge aripo.
Chii? kukosha kunogona kuita chirongwa mune rako basa uye neremangwana rako pachako?
Mune imwe nzira kana imwe, mabasa ese achave anoenderana nehunyanzvi uye komputa. Nekudaro, vazhinji vevagari havazivi kuti chii chirongwa uye kukosha kwazvichave nazvo mune ramangwana revana vavo. Muchokwadi, kudzidzisa komputa sainzi kwakakosha kune ramangwana revadiki uye nemakwikwi eSpanish.
Iyo kiyi yekumisikidza kudzidziswa nebasa sekunyatso kuita kweupfumi hwenyika.
Chii chaunofunga kuti ndicho chikonzero nei huwandu hwevakadzi vanodzidza nekuzvipira pacomputer sainzi uye tekinoroji hwadzikira mune iri kuwedzera digitised nyika?
Ini ndinofunga pane dambudziko re stereotype iro rakanyatso kudikanwa kuti riputse rakatenderedza kuoma kwemabasa ehunyanzvi uye kushomeka kwesimba revakadzi. Patsika nemagariro zvakanzwisiswa kuti basa rakaomesesa, raida kuzvipira uye kushanda nesimba, rakanga risina kugadzirirwa vakadzi uye nekudaro, kunyange mhuri dzakakurudzira vanasikana vavo kuti vatarise pamatavi enharaunda esainzi, senge mushonga. Vezvenhau vanoita basa rakakosha mukubvisa mukaha wechikadzi. Izvo zvinopfuura kuratidzwa kuti varume nevakadzi vanokwanisa zvakaenzana uye zvakafanira kuisa vakadzi musainzi uye tekinoroji, kwete yenyaya yeruramisiro kana kuenzana asi yekuita nemakwikwi.
Code.ORG inobhadhara sei ese mapurojekiti ayo emahara?
Kubva kune vedu vanopa, ayo ari kunyanya makuru makuru epasirese makambani, pamwe neakakura maAmerican philanthropists. Zvishoma nezvishoma isu tiri kutsvaga matsva matsva emari uye vanopa kubva kumatunhu akasiyana epasi nekuti tiri chirongwa chechokwadi chepasirese.
Ko hunyanzvi hwekutaura mitauro miviri hunokanganisa sei kupatsanurwa kwedhijitari uye ndeipi nzira iyo Code.ORG inoda kurwisa nayo?
Izvo zvinokanganisa nekuti kusaenzanisa kudzidziswa nebasa kunounza kushomeka kwehunyanzvi, izvo zvicharamba zvichinetsa kuvhara. Inokanganisa maererano nebasa, kugara zvakanaka, kukwikwidza uye kugadzirwa. Tanonoka neChirungu uye hatigone kuwana chinhu chakafanana kuti chiitike kwatiri nehurongwa (uye kufunga kwekuverenga).
Iwe unofunga kuti vechidiki vanhasi vane matambudziko nekugadzira, kufunga kwakadzama, uye kugadzirisa matambudziko?
Ini handina dhata yekupindura iwo mubvunzo. Asi kana ndichigona kuti kana pakuronga tinokudziridza kufunga kwemacomputer uye izvi zvinoda kuvandudzwa kwehumwe hunyanzvi hwehunyanzvi senge kufunga, kufunga kwakadzama kana kugadzirisa matambudziko Hatizive kuti mabasa emangwana achange akadii, asi tinoziva hunyanzvi hwavanoda uye uhwu ndehwe, pakati pevamwe.
Kudzokera kuInternational Day yeVasikana, unoronga paCode.ORG kuita zviitiko kana mishandirapamwe yakanangana nemhemberero iyi?
Kwete chaizvo sezvo isu tichigara tichiratidzira, sezvo chiri chikamu cheDNA yedu kuwedzera vasikana.
Iwe unofunga kuti kupindira kweCode.ORG munyika dziri munzira dzekuvandudza kunogona kuva chii?
Africa semuenzaniso ikondinendi ine zvakasarudzika zvakasarudzika. Munyika dzichiri kusimukira tinoshanda takabatana nemasangano epasi rese anoshanda mumunda, ivo vari, pamwe nehurumende dzemuno, mubatsiri akanakisa munzvimbo idzi.
Tinotenda Code.ORG timu uye kunyanya Fran del Pozo nekutarisisa kwavo uye nekupindura iyi mibvunzo yese pasina kuramba. Isu tinoshuvira kuzokwanisa kupa yedu tsanga yejecha mukuwedzera kwechirongwa pakati pevadiki, uye kunyanya kutyora zvipingamupinyi zvevakadzi muchikamu chisingafanirwe kuva nazvo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Gadget nhau » General » Noticias » Vasikana Vepamutemo muICT Day: Tinotaura naFran del Pozo, kubva kuCode.ORG
Huawei inovandudza iyo MateBook D 15 laptop ine itsva Intel chips
Samsung Odyssey G7: Yechokwadi kwazvo yemitambo yekutarisa